स्वास्थ्य पेज » सेनिटरी प्याडः कुरा बुझ्नु पर्छ ! सेनिटरी प्याडः कुरा बुझ्नु पर्छ ! – स्वास्थ्य पेज
धेरै पुरुषका नजरमा महिलाले प्रयोग गर्ने अति सामान्य वस्तु हो सेनिटरी प्याड । यसमा बहसको तुक नै देख्दैनन् उनीहरु । यो कति महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक सामान हो भन्ने बुझ्दैनन् उनीहरु, किनभने उनीहरुको याैनाङ्गबाट महिनैपिच्छे रगत बग्दैन
हालै गायक प्रकाश सपुतको एउटा गीतले निकै चर्चा पायो । महिला सशक्तीकरणको अवधारणामा बनाइएको गीतको बोल छ– कुरा बुझ्न पर्च । उक्त गीतको भिडियोमा समावेश एउटा दृष्यले मजस्ता धेरै युवतीहरुको मन लोभ्याएको छ । त्यसमा देखाइएको छ, प्रेमिका महिनावारी हुँदा उनको ब्वाइफ्रेन्ड सेनिटर प्याड बोकेर भेट्न आइरहेको ।
यो एउटा काल्पनिक दृष्य हो । वास्तविकतामा के कुनै प्रेमी आफ्नो प्रेमिकालाई सेनिटरी प्याड बोकेर भेट्न जान्छ होला ? हाम्रो समाजमा महिनाबारीलाई लिएर जस्तो दृष्टिकोण अद्यापी कायम छ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा यस्तो दुर्लभ नै हुन सक्छ । पुरुषहरु पसलमा गएर सेनिटरी प्याड माग्न नै धक मान्छन् ।
सेनिटरी प्याडलाई महिलाको नितान्त निजी र गोप्य सामानका रुपमा लिने गरिएको छ । घरमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नसमेत उचित ठानिँदैन । महिलासँग सम्वन्धित यस्ता चिजहरु किन्न जाँदा पुरुषको त मानौं पुरुषत्व नै धरापमा पर्छ । एउटी श्रीमतीले श्रीमानका मोजादेखि कट्टुसम्म आफैं किनेर ल्याउँछिन् र त्यसमा आश्चर्य मानिँदैन । तर कुनै श्रीमानले श्रीमतीका ब्रा, अन्डरवेयर किनिदिएको देख्नुभएको छ ? सायदै होला । सेनिटरी प्याड पनि लगभग त्यस्तै हो ।
सम्भवतः पहिलोपटक हुनुपर्छ, सेनिटरी प्याडको विषय यतिबेला बहसमा छ । तर, धेरैले सिरियसली लिएका छैनन् । गत साता माइतीघरमा केही युवतीहरुले प्याडमा लगाइएको कर हटाउन माग गर्दै सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरे । त्यसलाई कतिपयले ‘महिलावादीको नौंटङ्की’ भनको पनि सुनियो । प्याडलाई सर्वसुलभ बनाउन माग गर्दा आक्षेप लाग्छ– १० हजारको लिपिस्टिक लगाउनेहरुलाई प्याड निशुल्क चाहिने ?
धेरै पुरुषका नजरमा महिलाले प्रयोग गर्ने अति सामान्य वस्तु हो सेनिटरी प्याड । यसमा बहसको तुक नै देख्दैनन् उनीहरु । यो कति महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक सामान हो भन्ने बुझ्दैनन् उनीहरु, किनभने उनीहरुको याैनाङ्गबाट महिनैपिच्छे रगत बग्दैन । उनीहरुका अन्डरवेयर कहिल्यै रातो पदार्थले भिज्दैनन् । यसले उत्पन्न गर्ने स्वास्थ्य र व्यवहारिक समस्या अनि झिँझोपन उनीहरुले भोग्नु परेको हुँदैन ।
छोरी भएर जन्मपछि भोग्नैपर्ने एउटा प्राकृतिक क्रिया हो रजश्वला, जसलाई चलनचल्तिको भाषामा ‘महिनावारी’ भन्ने गरिन्छ । शारीरिक विकास एउटा चरणमा पुगेपछि महिलाको रजस्वला सुरु हुन्छ । किशोरी अवस्थामा सुरु हुने रजश्वलाको प्रक्रिया औसत ३८ वर्षसम्म जारी रहने अध्ययनले देखाएका छन् । यस प्रक्रियामा गर्भाशयले बनाएको रगतको तह योनीमार्ग हुँदै शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । सामान्यतया २८ दिनको चक्रमा यो दोहोरिने गर्छ ।
महिनावारी सुरु हुनुलाई महिला शारीरिक रुपमा परिपक्व भएको प्राकृतिक संकेतका रुपमा पनि बुझिन्छ । छोरी भएर जन्मलिइसकेपछि उमेरको एउटा सीमा पार गरेपश्चात यो महिनावारीको चक्रमा प्रवेश गर्छिन् । ठूली भएको महसुस गर्छिन् ।
महिनावारी हुँदा महिलाहरुमा अनेक स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । कतिपयका हकमा यो गम्भीर प्रकृतिको समेत हुन्छ । पेट दुख्ने, हातखुट्टा कटकट खाने, मूड अस्थिर हुने, जिउ दुख्ने जस्ता समस्याहरु आमरुपमा देखिने गर्छन् । यस्तो बेलामा स्याहार र आरामको निकै महत्व हुन्छ ।
महिनावारीलाई अपवित्र मान्ने पुरातन सोच आजपर्यन्त कायम छ । गाउँमा मात्र होइन सहरमै पनि महिलाहरुले महिनावारी हुँदा चुलौचौको गर्न पाउँदैनन् । संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धी हक दिएको छ । महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गर्न रोक लगाएको छ । तर बिडम्वना मान्नुपर्छ, महिनावारी भएका बेलामा अरुलाई छोएर गरेको पापबाट मुक्ति मिल्ने अन्धविश्वासमा महिला दिदीबहिनीहरु ऋषिपञ्चमीको व्रत बस्छन् । यस्तो व्रत बस्न, सरकारले नै उनीहरुलाई बिदा दिन्छ । यो भनेको राज्यको मूल संविधानमा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ भनि गरिएको कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो । अबुझ समाजले यसलाई अछुत, पर सर्ने र फोहोरी भनेर नाम दिएको छ । यो अज्ञानताको पराकाष्टा हो ।
महिनावारी हुँदा महिलाहरुमा अनेक स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । कतिपयका हकमा यो गम्भीर प्रकृतिको समेत हुन्छ । पेट दुख्ने, हातखुट्टा कटकट खाने, मूड अस्थिर हुने, जिउ दुख्ने जस्ता समस्याहरु आमरुपमा देखिने गर्छन् । यस्तो बेलामा स्याहार र आरामको निकै महत्व हुन्छ । यो समयमा तातोपानी पिउन र टेन्सनमुक्त भएर आराम गर्न डाक्टरहरुले सुझाउने गर्छन् । तर, महिलाहरुले आराम पाउँछन् नै कहाँ ? गाउँघरमा महिनाबारी भएका बेला खाना पकाउनु हुँदैन भनेर घाँस–दाउराजस्ता झन् भारी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सबैतिर सबैका लागि प्याड निशूल्क गर्न आवश्यक छैन र अनिवार्य पनि छैन । तर, ग्रामिण भेगका महिला र स्कुल पढ्ने छात्राहरुका हकमा चाहिँ निशूल्क गर्नु अत्यावश्यक छ । यो असम्भव कुरा पनि होइन ।
महिनावारीमा स्वास्थ्यजत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो सरसफाइ । चिकित्सकका अनुसार सरसफाइको कमिका कारण योनी चिलाउने, पोल्ने, इन्फेक्सन हुने, पिसाब पोल्ने र क्यान्सरसमेत गराउने किटाणु पैदा हुनेलगायत खतरा उत्पन्न हुन्छन् । यस्तो बेलामा महिनावारीको समयमा प्रयोग गरिने प्याडको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, नेपालमा दूरदराजका महिला दिदीबहिनीहरुमा अझै पनि सेनिटरी प्याडको पहुँच छैन । उनीहरु टालोले काम चलाउन वाध्य छन् । सेनिटरी प्याड उनीहरुका लागि विलासीताको वस्तु जस्तै हो ।
तर हरेक महिलाका लागि अत्यावश्यक र आधारभूत सामग्री हो सनिटरी प्याड । यसलाई प्रत्यक महिलाको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको दायित्वमा पर्छ । शहरी क्षेत्रका हुनेखाने महिलाहरुको हकमा सरकारले टाउको दुखाइरहनु परेन । तर, दुरदराजमा बस्ने विपन्न महिला र छात्राहरुको हकमा यसलाई निशूल्क गर्नैपर्छ । तर, उल्टो बजारमा यसको भाउ बढेको छ । व्यवसायीहरुले विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठ्दा सरकार चाहिँ ‘हामीले एक पैसा राजश्व बढाएका छैनौं’ भनेर पन्छिन खोज्यो । यदि लोककल्याणकारी सरकार हो भने यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सेनिटरी प्याड वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटा स्वास्थ्य सामग्री नै हो । तर, यसलाई कस्मेटिक सामग्रीको रुपमा लिने गरिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले सेनिटरी प्याडलाई स्वास्थ्य सामग्रीकै सूचीमा राखेर सहुलियतमा विक्री–वितरण गर्नु उचित हुन्छ ।
हो, सबैतिर सबैका लागि प्याड निशूल्क गर्न आवश्यक छैन र अनिवार्य पनि छैन । तर, ग्रामिण भेगका महिला र स्कुल पढ्ने छात्राहरुका हकमा चाहिँ निशूल्क गर्नु अत्यावश्यक छ । यो असम्भव कुरा पनि होइन । दुई वर्षअगाडि तत्कालीन सरकारले छात्राहरुलाई निशूल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम ल्यायो र बजेट पनि छुट्याएको थियो । त्यसबेला सबैले सरकारको प्रशंसा गरेका थिए । तर सरकारी ढिलासुस्तीले कार्यक्रमका कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । सुरुमा केही विद्यालयहरुमा वितरण भयो तर सबैतिर पुग्न सकेन । अहिले त बजेटबाटै यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।
जहाँसम्म भन्सारको प्रसंग छ, स्वदेशमा नै सेनिटरी प्याड उत्पादन हुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्दा भन्साररहित बनाउन सम्भव नहोला । यसले स्वदेशी उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर समस्यामा पर्छन् भन्ने तर्क पनि जायज नै हो । तर, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने हो भने सेनिटरी प्याड बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिँदा भयो । यसको विक्री वितरणमा भ्याट छुट दिन सकियो । त्यसो भएको खण्डमा नै नेपालमा नै सस्तोमा पर्याप्त उत्पादन भएर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा १ खर्ब १७ करोडको प्याड आयात भएको थियो । यति आयात प्रतिस्थापन भयो भने यो रकम स्वदेशमै बस्ने छ ।
कम पढेका र विकट ठाउँका दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हुँदैन । त्यसैले जस्तो भट्यो त्यस्तै लगाउने गर्छन् । त्यसकारण सरकारले नै प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्याडको गुणस्तरीयता पनि उत्तकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि सेनिटरी प्याड गुणस्तरीय भएन भने यही क्यान्सरको कारण बन्न सक्ने समेत कतिपय अध्ययनबाट देखिएका छन् । योनी महिलाको शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग भएकाले यसको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन सरकारी निकायहरुले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेनेटरी प्याड कटन र पीभीसी मेस सामग्रीबाट बनेका हुन्छन् । कुनै महिलालाई नरम खालका सामग्री प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ त केहीलाई नेटलेड लेयर सामग्री प्रयोग गर्दा । आफ्नो छाला कस्तो प्रकारको हो सोही अनुसार सेनेटरी प्याडको प्रयोग गर्नुपर्ने डाक्टरहरुले सुझाएका छन् ।
कतिपय ठाउँमा स्याम्पल देखाउँदा एकदमै राम्रो देखाउने तर बेच्ने बेला कमसल खालको दिने गरिएको पनि पाइन्छ । हामी पो पढेलेखेका, बुझेका छौ र धेरै कमाउने नभए पनि सकेसम्म राम्रो प्याड खोजी गर्छौ । कम पढेका र विकट ठाउँका दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हुँदैन । त्यसैले जस्तो भट्यो त्यस्तै लगाउने गर्छन् । त्यसकारण सरकारले नै प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अन्त्यमा भारतीय अभिनेता अक्षयकुमारको एउटा विज्ञापनको संवाद यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । त्यसमा उनी भन्छन्, ‘मर्नको लागि त सबैसँग पैसा छ, तर श्रीमतीको ज्यान जोगाउन पैसा छैन ?’
‘किन ?’ भनेर सोध्दा उनी जवाफ दिन्छन्, ‘चुरोटको डब्बामा मृत्यु भनेर लेखेको हुन्छ, अनि सेनिटरी प्याडको डब्बामा जीवन भनेर लेखेको हुन्छ । आफ्नो ज्यान जोखिमा राखेर यो दुईवटा चुरोट खाने पैसाले त आफ्नो श्रीमतीलाई सेनिटरी प्याड किनेर दिन सकिन्छ, किनभने उसले प्रयोग गरेको पुरानो प्याडले महामारीको समयमा के–कस्ता बिमारी निम्त्याउन सक्छन् त्यो त कल्पनाभन्दा पनि बाहिर छ ।’